Morpholin-3-One (109-11-5) - APICMO ဒြပ်ပေါင်းများ
ထုတ်ကုန်များ > Morpholin-3-One (109-11-5)
, ထုတ်လုပ်ရန် synthesize နှင့် CGMP ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအောက်မှာအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်ဖြင့် Morpholin-3-One (109-11-5) ၏အမြောက်အမြားထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်း
Morpholin-3-One (109-11-5) ကဗီဒီယို
3-ketomorpholine လည်း morpholin-3-One, 3-morpholone အဖြစ်လူသိများသည်, 3-MORPHOLINONE; MORPHOLIN-3-ONE; 3-Oxomorpholine; 3-Ketomorpholine; morpholine-3-တပါးတည်း။ ဒါဟာအလယ်အလတ် pharmacological အသုံးဝင်သည်။ မကြာမီကလေ့လာမှုများအချို့ morpholin-3-One အနကျအဓိပ်ပါယျကိုထိရောက်စွာ, G1 အဆင့်မှာဆဲလ်သံသရာဖမ်းဆီးစေ P53 နှင့် Fas အဘိဓါန်များအဆင့်ဆင့်တိုးမြှင့်ခြင်း, အဆုတ်ကင်ဆာအတွက် A549 ဆဲလ် apoptosis သွေးဆောင်နိုင်ပြသခဲ့ကြသည်။ ဤသည်ကအဆုတ်ကင်ဆာဆဲလ် apoptosis ၏မော်လီကျူးယန္တရား elucidating နှင့်လည်းအလားအလာ Anti-ကင်ဆာမူးယစ်ဆေးဝါးများဖြစ်လိမ့်မယ်များအတွက်အသုံးဝင်သော tool ကိုဖြစ်စေခြင်းငှါဖော်ပြသည်။ ယင်း၏အနကျအဓိပ်ပါယျ၏အချို့ arteriosclerosis နှင့် hypertriglyceridemia များ၏ကာကွယ်တားဆီးရေးနှင့်ကုသမှုများအတွက်အသုံးဝင်သောဖြစ်သက်သေပြခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
Morpholin-3-One (109-11-5) အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်
CAS အောင်မင်း% 98.0
MDL အရေအတွက် MFCD00631009
InChI Key ကို VSEAAEQOQBMPQF-UHFFFAOYSA-N ကို
မော်လီကျူးအလေးချိန် (ဆ / mol) 101.105
အပြုံး C1COCC (= အို) N1
အရည်ပျော်မှတ် 106.0 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှ° 108.0
Morpholin-3-One (109-11-5) အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့်ကိုင်တွယ်မှု
(109-11-5) GHS H ကိုထုတ်ပြန်ကြေညာချက်
Morpholin-3-One GHS P ကိုထုတ်ပြန်ကြေညာချက်
မျို IF: ပါးစပ်သုတ်ခြင်း။ အန်သွေးဆောင်မနေပါနဲ့။
ရှိုက် IF ။ မျက်လုံးများလျှင်: မိနစ်အနည်းငယ်အဘို့ရေနှင့်အတူသတိဆေး။ ပစ္စုပ္ပန်နှင့်ပြုပါရန်လွယ်ကူလျှင်, မျက်ကပ်မှန်ဖယ်ရှားပါ။ လက်မဆေး Continue ။ တစ်ဦးကိုချက်ချင်းအဆိပ်ရေးဗဟိုဌာနသို့မဟုတ်ဆရာဝန် / ဆရာဝန်ခေါ်ပါ။
Morpholin-3-One (109-11-5) ဆောင်းပါးများ
သူမေး, et al ။ "Novell morpholin-3-One အနကျအဓိပ်ပါယျ apoptosis သွေးဆောင်ခြင်းနှင့် A53 အဆုတ်ကင်ဆာဆဲလ်တွေမှာရှိတဲ့ P549 နှင့် Fas အဘိဓါန်၏အဆငျ့မွှငျ့တငျ။ "
Bioorganic & ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဓါတုဗေဒ 15.11 (2007): 3889 ။
et al Murai, Hiromu ။ "Morpholinone အနကျအဓိပ်ပါယျနှင့်အသုံးပြုခြင်း၏နည်းလမ်း။ "
အမေရိကန်, US4237132 ။ 1980 ။
Gonzalez-Garcia မာရီယာ Rosario နှင့်ဖာနန်ဒက်ဇမာရီယာကာမဲန်။
"Morpholinyl MOGAT-2 inhibitors အဖြစ်အသုံးဝင်သော derivatives ။ " (2015) ။
Morpholin-3-One (109-11-5) အစုလိုက်မှာယူမှု & စျေးနှုန်း:
အဘို့အ 1 ပြန်လည်သုံးသပ် Morpholin-3-One (109-11-5)
ကျနော်တို့ synthesize နှင့်သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးအမြောက်အများအတွက် Morpholin-3-One ထုတ်လုပ်ရန်။ အားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန် cGMP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ၌ရှိကြ၏။
Morpholin-3-One (109-11-5) ဖျေါပွခကျြ
Morpholin-3-တအဆုတ်ကင်ဆာ apoptosis အတွက်သော့ချက်အခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်သည်။ မကြာသေးမှီကလေ့လာမှုများ, ယင်း၏အနကျအဓိပ်ပါယျအချို့ကိုအဆုတ် cancer.As ဆေးဝါး intermediate အတွက်ဆဲလ်အသေခံခြင်းဖြင့်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရသည့်မော်လီကျူးယန္တရားကိုရှင်းပြနိုင်သည့်အနကျအဓိပ်ပါယျအဆိုပါ Gap 1 အဆင့်မှာဆဲလ်သံသရာဖမ်းဆီးသွေးဆောင်ကြောင်းထင်ရှား p53 နှင့် Fas အဘိဓါန်အဆင့်ဆင့်၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးကိုပိုကောင်းစေပါတယ်, ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းတွင်ပါပြီ လူ့ A549 Non-သေးငယ်တဲ့အဆုတ်ကင်ဆာဆဲလ်တွေမှာရှိတဲ့ apoptosis ၏စတင်ဖွဲ့စည်း။
အလားအလာ Anti-ကင်ဆာမူးယစ်ဆေးဖြစ်ခြင်းနေသော်လည်း Morpholin-3-One (109-11-5) hypertriglyceridemia နှင့် arteriosclerosis ၏ကုသမှုအတွက်အသုံးဝင်အရာတိကျသောအနကျအဓိပ်ပါယျရှိပါတယ်။
Morpholin-3-One (109-11-5) ၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာဖော်မြူလာ:
အဘယ်သူမျှမ CAS ။ 109-11-5
ပွက်ပွက်ဆူနေသောအမှတ် (C) 313
ပေါက်ကွဲလုနီးပါး (C) 143.1
သိပ်သည်းဆ (ဆ / စင်တီမီတာ3) 1.12
IUPAC name ကို Morpholin-3-One
အရည်ပျော်အမှတ် (C) 100 - 105
Monoisotopic အစုလိုက်အပြုံလိုက် (ဆ / mol) 101.048
နာမ် · 3-Ketomorpholine
ဓာတုနှင့် Morpholin-3-One ၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ Properties ကို
109-11-5 ၏ Bond
ဟိုက်ဒရိုဂျင်နှောင်ကြိုး အလှူရှင်အရေအတွက် - 1
rotate နှောင်ကြိုး အဘယ်သူမျှမ
Morpholin-3-One (109-11-5) အစိုင်အခဲအဝါရောင်မှအဖြူရောင်ဖြစ်ပါသည်
အဆိုပါထုတ်ကုန်စံအပူချိန်နှင့်ဖိအားအောက်တွင်တည်ငြိမ်မှုရှိသော်လည်းဤအခြေအနေများမြင့်မားသောအခါက decomposes ။
109-11-5 computing Properties ကို
XLogP3-AA ကို -0.8
Topological ဝင်ရိုးစွန်းမျက်နှာပြင်ဧရိယာ 38.3 တစ် ^ 2
အတိအကျ Mass (ဆ / mol) 101.048
Morpholin-3-One (109-11-5) Synthesis လမ်းကြောင်း
တက် Morpholin-9-One ၏3ပေါင်းစပ်လမ်းကြောင်းမှရှိနေပါသည်။ အဆိုပါနည်းလမ်းများအချို့ကိုအောက်တွင်:
Morpholin-3-One (109-11-5) ၏ Applications ကို
အဆိုပါ Morpholin-3-One အနကျအဓိပ်ပါယျအချို့သည်ဤအရပ်, အဆုတ်ကင်ဆာပစ်မှတ်ထားထားတဲ့ Anti-ကင်ဆာမူးယစ်ဆေးရှာဖွေတွေ့ရှိမှု, များအတွက်သိသာထင်ရှားသောသုတေသန tool ကိုဆဲလ် apoptosis induces
၎င်း၏တိကျတဲ့အနကျအဓိပ်ပါယျ hypertriglyceridemia နှင့် arteriosclerosis ၏ကုသမှုထဲမှာအဓိကအခန်းကဏ္ဍကနေ။
အသားအရေ sensitivity ကိုများနှင့်မတည့်တုံ့ပြန်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်
ရှူရှိုက်မိပါအပေါ်သို့ acute အဆိပ်အတောက်
လုံခြုံမှုဆောင်ရွက်ချက်များ Morpholin-3-One ကိုင်တွယ်တဲ့အခါမှာ
ဘေးကင်းလုံခြုံမှုမျက်မှန်, ဓာတု-ခံနိုင်ရည်လက်အိတ်, ရော်ဘာဖိနပ်တစ် Full-မျက်နှာမျက်နှာဖုံးနှင့်အသက်ရှူကိရိယာပေါ်ချပြီးအားဖြင့်မြင်နိုင်သောအသားအရေကာကွယ်ပါ။
ဓာတ်ခွဲခန်း withconvenient eyewash တစ်ဦးဘေးကင်းလုံခြုံမှုရေချိုးခန်း, အိပ်ဇောလေဝင်လေထွက်နှင့်လေထုသန့်ရှင်းရေးထုတ်ကုန် outfitted ဖြစ်ပါတယ်အာမခံပါသည်။
လတ်ဆတ်တဲ့လေထုရွှေ့ပါ။ သတိလစ်မေ့မြော, အသက်ကိုပြင်းပြင်းရှူခြင်းသို့မဟုတ်အသက်ရှုအခက်အခဲများလက္ခဏာအဘို့အထွက်စစ်ဆေးပါ။ အစွန်းရောက်ကိစ္စများတွင်, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအာရုံကိုရတဲ့မတိုင်မီအတုအသက်ရှူသို့မဟုတ်အောက်ဆီဂျင်ထောက်ပံ့မှုကိုစက်ကိုအသုံးပြုပါ။
နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်ခံတွင်းဆေးကြောပါ။ နို့သို့မဟုတ်ရေအနည်းဆုံးတစ်ဝက်တစ်လီတာသောက်ပါ။ သားကောင်အဆိပ်သင့်လက္ခဏာကိုပြသပါလျှင်တစ်ဦး toxicologist မခေါ်နဲ့ချက်ချင်းဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကူအညီရှာကြာလော့။
10 မိနစ် 15 များအတွက်ဧရိယာဆေးကြောဖို့အချို့သောအအေးပြေးရေနှင့်ဆပ်ပြာကိုသုံးပါ။ အဆိုပါမတည့်တုံ့ပြန်မှုပြင်းထန်ဖြစ်လာမှု၌သင့်လျော်သောဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကူအညီရယူပါ။
မျက်တောင်အပေါ်ကိုအာရုံစဉ် 15 မိနစ်ဘို့ရေတစ်ရက်ရက်ရောရောငွေပမာဏနဲ့ဆေးလိုက်ပါ။ Morpholin-3-One (109-11-5) အပြီးအပိုင်မကျြစိကိုပျက်စီးစေဖွယ်ရှိသည်နောက်ပိုင်းထပ်မံအကြံဉာဏ်ဆရာဝန်တစ်ဦးကိုဆက်သွယ်ပါ။
3 ။ သိုလှောင်ခြင်း
အခန်းအပူချိန်မှာ Store က
သာခွင့်အသုံးပြုသူများအနေဖြင့်အသုံးပြုခွင့်ကန့်သတ် Morpholin-3-One တက်သော့ခတ်
4 ။ Morpholin-3-One ကိုင်တွယ် (109-11-5)
အဆိုပါ GHS05, GHS06 နှင့် GHS07 ထုတ်ပြန်ချက်များစာရင်းဝင်အဖြစ်က၎င်း၏အန္တရာယ်ရှိသောသဘောသဘာဝကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်သေချာပါစေ
အများဆုံး aeration နဲ့လေဝင်လေထွက်ဓာတ်ခွဲခန်းများတွင်အလုပ်
လုံခြုံမှုရေချိုးခန်းထဲမှာရေပန်း, ငြိမ်းအေးနှင့် eyewash မှအဆင်ပြေ access ကိုရှိမယ့်သေချာ
Morpholin-3-One ကို အသုံးပြု. ပြီးနောက်,
ချွတ် ယူ. သူတို့ကိုမသုံးခင်စွန်းအဝတ်ကိုလျှော်
အဆိုပါ spillages ကို clean up
6 ။ မီးသတ်သမားဆောင်ရွက်ချက်များ
အဆိုပါအဆိပ်ပြိုကွဲထုတ်ကုန်အသက်ရှူခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်အတည်ပြုလိုက်အသက်ရှူကိရိယာပေါ်မှာထားပါ။ ခြောက်သွေ့တဲ့အမှုန့်, ပေါ်လီမာရေမြှုပ်, အရက်, ဒါမှမဟုတ်ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဓာတ်ငွေ့နှင့်အတူမီးသတ်။
ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဖြန့်ချိသည့်အခါ Spillages နှင့်ပေါက်ကြားသည့်ဂေဟဗေဒအားထိခိုက်ဖြစ်နိုင်သည်။ ရေသင်တန်းများသို့မဟုတ်ရေနုတ်မြောင်းသို့ streaming ကနေယိုဖိတ်ပိတ်ဆို့ဖို့အာမခံပါသည်။ , အစိုင်အခဲကိုတက်ထက်တောင်သဲသုံးပြီးအရည်ဓါတုဗေဒကိုစုပ်ယူသဖြင့်, ခုံတန်းလျားဆေးကြောပါ။ စွန့်ပစ်ဘို့အဆင်သင့်, တံခါးပိတ်ပေမယ့်တံဆိပ်ကပ်ကွန်တိန်နာအတွင်းဒြပ်စင်ပယ်သွန်းလေ၏။
8 ။ Morpholin-3-One ၏တည်ငြိမ်မှု & reactivity
Morpholin-3-One (109-11-5) အပူနှင့်မီးတောက်များသို့မဟုတ်မီးစများ၌၎င်းကဲ့သို့အခြားစက်နှိုးသတင်းရင်းမြစ်အောက်မှာမတည်မငြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ ပြိုကွဲအဆိပ်နိုက်ထရိုဂျင်အောက်ဆိုဒ်မှဦးဆောင်ရာအရပ်ကိုကြာမည်ကို စိုးရိမ်. , ခိုင်မာတဲ့အက်ဆစ်, ခြေစွပ်များနှင့်၎င်းသည်အောက်စီဂျင်ဓာတ်ပေါင်းများကဖော်ထုတ်ရှောင်ကြဉ်ပါ, CO2နှင့်ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုဒ်အငွေ့။
9 ။ 109-11-5 ဓာတုရှင်း
အဆိုပါဒေသခံဖက်ဒရယ်, ဒါမှမဟုတ်အမျိုးသားရေးဓာတုစွန့်ပစ်စွန့်ပစ်ခြင်းလမ်းညွှန်ချက်များနှုန်းအဖြစ် Morpholin-3-One (109-11-5) များဖယ်ရှားရှင်းလင်းရေး။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်တစ်ဦးကမီးလောင်ပေါက်ကွဲလွယ်တဲ့ဒြပ်စင်နှင့်အတူကရောထွေးနှင့် Pre-installed afterburner နှင့် scrubber နှင့်အတူတစ်စညျးမဉျြးစညျးကမျးမီးရှို့ဖျက်ဆီးထဲမှာမီးရှို့။
10 ။ Morpholin-3-One ၏ shipping
ဒါဟာနေသမျှကာလပတ်လုံးရထားပုံမှန်အပူချိန်နှင့်ဖိအားအတွင်းထိန်းသိမ်းထားတာဖြစ်ပါတယ်အဖြစ်အဘို့လေ, မြေပြင်, ဒါမှမဟုတ်ရေသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကနေတဆင့်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း shipthe ဖို့အတော်လေးလုံခြုံပါတယ်။
Morpholin-3-One (109-11-5) အားလုံးနိုင်ငံတကာဓာတုထိန်းချုပ်မှုစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ ဒါဟာထို့ကြောင့်အသုံးပြုရန်လုံခြုံဖြစ်ပါတယ်။ , ကိုင်တွယ်သိုလှောင်, ဒါမှမဟုတ်ထုတ်ကုန်များ၏စွန့်သည့်အခါသင့်ရဲ့ပြည်တွင်းနှင့်ဖက်ဒရယ်စည်းမျဉ်းများအတိုင်းလိုက်နာရန်သေချာစေပါ။
ကျနော်တို့အတွေ့အကြုံရှိပစ္စည်းအတွက် excel သူကိုသိပ္ပံပညာရှင်များနှင့်ဘဝသိပ္ပံ, ဓာတုပေါင်းစပ်, ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဓာတုဗေဒ, Chromatography, သုတေသနနှင့်ဆက်စပ်ရာနယ်ပယ်များတွင်ဂုဏ်ယူ။
Morpholin-3-One (109-11-5) အစုလိုက်အမိန့်နှင့်စျေးနှုန်း
သငျသညျအမြောက်အများအတွက် Morpholin-3-One ရှာနေဆိုပါကပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ရင်းနှီးဖော်ရွေခြင်းနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖောက်သည်စောင့်ရှောက်မှုအဖွဲ့ကမှတဆင့်အမိန့်ထားပါ။
ဇီဝနည်းပညာသတင်းအချက်အလက်, အမေရိကန်သည်အမျိုးသားလုံခြုံရေးရေးစင်တာ။ ဆေးပညာ, Pubchem အမျိုးသားစာကြည့်တိုက်, Morpholin-3-တကဏ္ဍများ 1-10 ။
Springer-Verlag, 1997 - ဓာတုဗေဒ, အော်ဂဲနစ်, အော်ဂဲနစ်ဓာတုဗေဒ Beilstein လက်စွဲစာအုပ်: 1960 ထံမှ 1979 မှတဆင့်စာပေဖုံးအုပ်ပဉ္စမဖြည့်စွက်စီးရီး, အတှဲ 27, အပိုင်း 28
Melvin V. Koch, Kurt M. VandenBussche, Ray ဒဗလျူ Chrisman, Micro နဲ့ရှိ Instrumentation: အမြင့် throughput စမ်းသပ်နှင့်လုပ်ငန်းစဉ်များအတွက်။